राजु बास्कोटा| Corporate Nepal
बुद्ध एयरले दुर्गम र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै उडान नगर्ने, महामारीले पुर्याएको घाटापूर्ति प्राथमिकतामा राख्ने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले तयारी गरिरहेको नयाँ वायुसेवा स्थापनासहितको दुर्गम क्षेत्र उडान नगर्ने भएको छ । बुद्ध एयरका प्रवन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले कर्पोरेट नेपालसँगको कुर…
ट्रंक लाइनको महशुललाई लिएर निजी क्षेत्रलाई बदनाम गर्न खोजियोः शेखर गोल्छा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न लचिलो भएर आउनुपर्ने बताएका छन् । कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले कोभिड सुरु भएपछि शिथिल …
आफैं बजेट बनाउने अख्तियारी पाएका पर्यटनका निकाय नै बजेट बनाउन उदासिन
काठमाडौं । आफैं बजेट बनाउन अख्तियार पाएका पर्यटन क्षेत्रका निकायको बजेट आउन ढिलो हुने गरेको छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै बहानामा आफैं बजेट बनाउने र आफैंले कार्यान्वयन गर्ने निकायकै बजेट आउन ढिलो हुने गरेको हो ।…
युनियन र व्यवस्थापनको चेपुवामा बोर्डका कर्मचारी, सूचना चुहाएको विषयमा छानबिन समिति
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनको चेपुवामा नेपाल पर्यटन बोर्डका कर्मचारी परेका छन् । व्यवस्थापनले आफ्नो अनुुकुल काम गर्ने कर्मचारी परिचालन गर्ने र कर्मचारी युनियनले पनि दबावपूर्ण सूचनामार्फत…
काठमाडौं । मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पाताल सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले अस्पाताल सञ्चालन गर्न सात वाणिज्य बैंकसहित ११ वटा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न समस्या भएपछि अस्पत…
अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारी आन्दोलनः बैंक, टेलिकम र वायुसेवाका कर्मचारी किन असन्तुष्ट ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, टेलिकम सेवाप्रदायकदेखि वायुसेवा निगमसम्मका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । अत्यावश्यक सेवालाई अवरोध गर्ने गरी आन्दोलेन गर्न नपाइने भएपनि कार्या…
विकल्प खोज्दै पर्यटन व्यवसायी, बिक्रीको सूचीमा राख्नेदेखि साझेदार खोज्नेसम्म
काठमाडौं । कोरोना महामारीपछि पर्यटन व्यावसाय अति प्रभावितको सूचीमा परेको छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि पुनरकर्जादेखि व्यवसायिक निरन्तरताको कर्जा दिएर सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको भएपनि त्यसको प्रभावक…
काठमाडौं । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)को नमूना संस्था मानिएको नेपाल पर्यटन बोर्डमा लोकसेवाको सिद्धान्त विपरित कर्मचारी भर्ती भइरहेको छ । लोकसेवा आयोगको ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्त सम्बन्धी …
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनन्जय रेग्मीले बोर्डको पैसा मनोमानी खर्चिने र बेथितिलाई प्रशय दिन थालेका छन् । बोर्डमा प्रवेश गरेको डेढ वर्षमा उनले आफ्नै कार्यकक्ष र सचिवालय मर्मतक…